War deg deg ah Qaraxyo is xiga oo gordhaweyd ka dhacay hotelka uu Muqdisho ka dagan yahay Madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu | Somalisan.com Home
War deg deg ah Qaraxyo is xiga oo gordhaweyd ka dhacay hotelka uu Muqdisho ka dagan yahay Madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu 9/12/2012 2:58:00 P
Jaziira goust House oo uu ka socday wadahalo u dhaxeeyey madaxweynaha cusub prof Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ka socday dowlada kenya ayaa la la eegtay qaraxyo kala duwan Waxaa daqiiqado ka hor qarax xooggan uu ka dhacay hoteelka uu ka deganaa
Muqdisho madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr.Xasan Sheekh Maxamuud. Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarradan iyadoo sheegtay inay la heleen halkii ay bartilmaameedsanayeen, balse ma aysan sheegin khasaare ay ku geysteen, waxaana bayaan ay soo saareen ku sheegeen inaysan aqoonsanayn madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Qaraxyada oo ahaa ismiidaamin ayaa la sheegay inuu ka badbaaday madaxweynaha kaasoo la doonayay in lagu dilo qaraxa.
Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu hoteelka kula shirayay diblomaasiyiin shisheeye balse mar kaliya laga war helay labo qarax oo waa weyn kuwaasoo ahaa is maadaamin.
qarax hore ayaa ahaa mid qof isku soo xirey walxaha qarqa uu ku qarxay afaafka hore ee hoteelka kaasi oo ay wararku sheegayaan in ay ku geeriyoodeen ilaa laba ka mid ah ciidamada AMISOM iyo 3 ka mid ah ciidamada dowlada .
Goob joogayaal aan la hadalnay ayaa noo sheegay in labada qarax oo ahaa kuwo ismiidamin ah midkood rasaas lagu furey kadib uu qaraxay halka kan kale oo doonayay inuu gudaha u galo hoteelka uu isna ku qarxay iridka hoteelka markii ilaalada iyo is qarxiya ay is qabteen.
Inkastoo wararka horu dhaca ah ay sheegayaan in dad ku dhow 5 ruux ay dhinten ayaa hadana Goob joogaha aan la hadalnay waxaa uu sheegay in khasaaruhu aad u yaryahay islamarkaana madaxweynaha iyo dadkii la joogeyba ay bad qabaan wax gaareyna aaney jirin.